အမေရိကန်-ဗြိတိန်-ဩစတြေးလျ နျူကလီးယားရေငုပ်သင်္ဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အန္တရာယ် သုံးခုကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန် နှင့် ဩစတြေးလျ တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုထားသည့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ မမြင်နိုင်သော အန္တရာယ် သုံးခုဟူ၍ မီးမောင်းထိုးပြောကြားခဲ့သည်။စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည့် တရုတ် နှင့် ဥပရောသမဂ္ဂ(အီးယူ) အကြား ၁၁ ကြိမ်မြောက် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဆင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာ နှင့် လုံခြုံရေးမူဝါဒ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် Josep Borrell နှင့်အတူ ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ် ဝမ်ရိက အထက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝမ်က အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန် နှင့် ဩစတြေးလျ တို့သည် သုံးနိုင်ငံ လုံခြုံရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း နှင့် နျူကလီးယားရေငုပ်သင်္ဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြကြောင်း ၊ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝိုင်းက အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြောင်း အထူးသဖြင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုသည် ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေး နှင့် နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် အလားအလာရှိသည့် မမြင်နိုင်သော အန္တရာယ်သုံးခုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်ဟုသာ တရုတ်နိုင်ငံက ယုံကြည်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ပထမအချက်မှာ စစ်အေးတိုက်ပွဲကို တစ်ကျော့ပြန်လှည့်နိုင်သည့် အန္တရာယ် ဖြစ်စေသည်။ သုံးနိုင်ငံအနေဖြင့် အတွေးအခေါ်ယူဆချက် စည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီး စစ်ရေးအုပ်စုအသစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ခြင်းသည် ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ အချို့သောဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် ၎င်းတို့၏ စစ်ရေးစွမ်းရည် တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် တွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခအန္တရာယ်များကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ် စစ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုပြိုင်ပွဲတစ်ခု၏ မမြင်နိုင်သော အန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တတိယအချက်မှာ ယင်းသည် နျူကလီးယားပြန့်ပွားမှုအတွက် မမြင်နိုင်သောအန္တရာယ်ကို ဦးတည်စေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးစနစ်အပေါ် သက်ရောက်စေနိုင်ပြီး တောင်ပစိဖိတ်ဒေသနျူကလီးယားကင်းစင်ရေးဇုံ သဘောတူညီချက်ကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေကာ ဒေသတွင်း၌ နျူကလီးယားကင်စင်ရေးဇုံထူထောင်ရန် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ကြိုးပမ်းချက်ကို အားယုတ်သွား စေမည်ဖြစ်သည်။
“ သုံးနိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ နဲ့ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုက ပါဝင်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်” ဟု ဝမ်ရိက ဆိုသည်။(Xinhua)
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attendsapress conference
BEIJING, Sept. 28 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi has highlighted three hidden dangers posed by the proposed cooperation by the United States, Britain and Australia on nuclear submarine technology.
Wang said that the United States, Britain and Australia have formedatripartite security partnership and tried to carry out nuclear submarine cooperation, adding that the international community is highly concerned about this development, especially Asia-Pacific countries.He said China believes the move brings three major hidden dangers to regional peace and stability and the international order.
“We urge the three countries to follow the trend of the times and playaconstructive role in regional peace and stability,” he said. Enditem